बच्चालाई कसरी पढ्ने बनाउने ? लाै सिकाैं ! | mulkhabar.com
November 4, 2018 | 11:22 am 207 Hits
काठमाडौं, १८ कात्तिक –
विहान उठेर राम्ररी तङ्गि्रन नपाई विद्यालय गएका बच्चा साँझ घर र्फकन्छन् । हामी सोध्छौं, ‘आज के छ होमवर्क ?’ बच्चाको जवाफ आउनुअघि नै हामी आदेश दिन्छौं, ‘लु खाजासाजा खाएर होमवर्क सक्नु ।’
कति अभिभावकलाई लाग्छ, होमवर्क भनेको आफ्नो बच्चाको ड्युटी हो । त्यो पुरा गरेपछि ढुक्क हुन्छ । त्यही कारण उनीहरु हतार-हतार होमवर्क गराउँछन् । जबकी बच्चाको ध्येय फरक हुनसक्छ । उनीहरुले आफ्ना आमाबुबासँग दिनभरको कुरा शेयर गर्न चाहेका हुन्छन् । आफ्नो अप्ठ्यारो सुनाउन चाहेका हुनसक्छन्, आफुले पाएको स्यावासी सुनाउन आतुर हुनसक्छन् । तर, हामी भन्छौं, ‘होमवर्क गर ।’
त्यसैले पनि विद्यालयबाट फर्किएपछि बालबालिकासँग केही समय विताउने प्रयास गरौ । बच्चा खुसी हुन्छ । साथै, उनीहरुको आनीबानी, इच्छा-आकांक्षा तथा रहनसहनका बारेमा समेत धेरैकुरा जान्ने अवसर मिल्छ । साथै, उनीहरुलाई के कुराले खुशी तुल्याउँछ तथा के कुराले दुखी तुल्याउँछ भन्ने समेत जानकारी हुन्छ ।
जब हामी बालबालिका सामु यो प्रश्न गर्छौ, तब बालबालिका दिनभरको घटना फररर सुनाउन थाल्छन् । भन्छन्, मैले आज यस्तो गरे, फलानो साथीले यस्तो गर्‍यौ, शिक्षकले मलाई छिटो क्लासवर्क सकाएकोमा यसरी स्यावासी दिनु भयो इत्यादी । त्यतिमात्र हैन, यदी उनीहरुलाई शिक्षकले साच्चिकै राम्रो अंक दिनुभएको छ वा पुरस्कार दिनुभएको छ भनेपनि उनीहरु त्यस्ता कुरा स-गौरव देखाउने गर्छ । र, तपाईको हौसला तथा प्रोेत्साहनले उनीहरुलाई राम्रो गर्नका थप उर्जा मिल्छ ।
बच्चाहरु खाना भनेपछि धेेरै कचकच गर्छन् । उनीहरुलाई आफूले लगेको खानेकुरा भन्दा अरुले तयार पारेको खानेकुरा बढी मिठो लाग्छ । त्यसैले , उनीहरुलाई सोधौ, आज के खायौ ? कसको खानेकुरा बढी मनपर्यो ? ताकि अर्को पटक लञ्जबक्स तयार पार्दा त्यही खानेकुरा राख्न सकियोस् । यसले बच्चाको फुड हैविटबारे पनि जान्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
(सान्दर्भिक लागेर अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको – सं)